အန်ဒါမန်ဟီးရိုး: July 2008
ရဲရင့်မြင့်မောင် - ခေတ်ပြိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ရောက်အောင် လူမှောင်ခိုကုန်ကူးသည့် လုပ်ငန်းအများအပြားတွင် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ဒုက္ခ သည်စခန်းများမှတဆင့် အမေရိကန်နိုင်ငံရောက်အောင် လူကုန်ကူးသည့်လုပ်ငန်းမှာ ၂၀၀၆ ခုနှစ်ကစ၍ ခေတ် စားလာသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ သွားရောက်အလုပ်လုပ်လိုသူ မြန်မာများအဖို့ အမေရိကန် ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာရရန် သာမန်အား ဖြင့် ခဲယဉ်းသည်။ ထို့ကြောင့် အမေရိကန်သွားလိုသူ ပြည်တွင်းပြည်ပ မြန်မာအချို့ကို ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ဒုက္ခသည်စခန်းများသို့ လူကုန်ကူးပြီး ပို့သည့်နည်းလမ်းကို အသုံးချပြီး အမေရိကန်ဝင်ခွင့်ရဖို့ ကြိုးစားသည့်နည်း များ သုံးလာကြသည်။
ဥပမာ-ရန်ကုန်မြို့ရှိ နိုင်ငံရေးနှင့် မပတ်သက်သူတဦးက အမေရိကန်နိုင်ငံသွားလိုလျှင် ပွဲစားအမျိုးမျိုးမှတဆင့် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ဒုက္ခသည်စခန်းတခုခုသို့ ဒုက္ခသည်အတုလုပ်ပြီး တတိယနိုင်ငံ တခုခုရောက်အောင် လူ ကုန်ကူးကြခြင်းဖြစ်သည်။
ပွဲစားမှာလည်း အမျိုးမျိုးရှိပြီး ရန်ကုန်မှ နယ်စပ်ရောက်အောင် ပို့ပေးသည့်အဆင့် ပွဲစားများတွင်ပင် အမေရိ ကန်နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်နှင့် ရောက်နေပြီး နောက်ပိုင်း အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်လာသူ မြန်မာအချို့ပင် ပါဝင်သည်ဟု ခေတ်ပြိုင်က စုံစမ်းသိရသည်။ အဆိုပါ အမေရိကန်နိုင်ငံသား မြန်မာပွဲစားများကို ရန်ကုန်ကို အ လည်အပတ် ပြန်စဉ်ကာလအတွင်း အမေရိကန်သွားလိုသူများကို အခကြေးငွေယူပြီး နယ်စပ်ပွဲစားများ ကတ ဆင့် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ဒုက္ခသည်စခန်းတခုခုသို့ လူမှောင်ခိုကုန်ကူးခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများမှ မြန်မာဒုက္ခသည်များ အမေရိကန်အပါအ၀င် တတိယ နိုင်ငံများသို့ ထွက်ခွာသည့်လမ်းကြောင်းမှာ ယခုအခါ ငွေကြေးတတ်နိုင်သူများ၏ စားကျက်ခွင်တခုအဖြစ် ပြောင်းလဲသွား ပြီဟု နို့ဖိုးဒုက္ခသည်စခန်းမှ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း ဦးမြင့်အောင်က ပြောသည်။
၎င်းက “ငွေကြေးတတ်နိုင်သူတွေကတော့ စိတ်ကြိုက် လုပ်ချင်တာရတဲ့ ခွင်ဖြစ်သွားတာ (၂) နှစ် ကျော်သွားပြီ။ ကျနော်တို့စခန်းမှာ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ရထားတဲ့ မြန်မာတယောက် ရန်ကုန်မှာကျန်နေတဲ့ သူ့မိသား စုကိုခေါ်ပြီး ဘတ်ငွေ (၃)သိန်းလောက် အကုန်ခံပြီး ဒုက္ခသည်စခန်းက လူကြီးတွေ ရပ်ကွက်မှူးတွေနဲ့ ညှိလိုက် တာ အခုမိသားစုလိုက်ကို အမေရိကန်ရောက်ကုန်ပြီ။ ဒါက စခန်းအချို့မှာဖြစ်နေတာ၊ အထူးသဖြင့် မဲဆောက် နဲ့နီးတဲ့ စခန်းတွေမှာဖြစ်တယ်” ဟု ပြောသည်။
ရန်ကုန်အပါအ၀င် ဒေသအသီးသီးက မြန်မာများမှာ ဒုက္ခသည်စခန်းများမှတဆင့် အမေရိကန်ရောက်ရှိရေးအ တွက် ထောင်မြင်ရာစွန့်ကာ မဲဆောက်နှင့် ဒုက္ခသည်စခန်းများရှိ အသိအကျွမ်း ဆွေမျိုးများ၊ ကြားပွဲစား များနှင့် ဆက်သွယ်ကာ ငွေထုပ်ပိုက်လာသူများ အဆင်ပြေသူများ ရှိသကဲ့သို့ အဆင်မပြေဘဲ အလိမ်ခံရကာ ဖွတ်မရ ဓားမဆုံး ဘ၀ပျက်၍ မဲဆောက်တွင် သောင်တင်နေသူများလည်း အများအပြားရှိသည်။
ဒုက္ခသည်ပွဲစားများသည် ရန်ကုန်၊ မော်လမြိုင်၊ ဘားအံကဲ့သို့ မြို့ကြီးတို့မှ လူများကိုဆက်သွယ်ပြီး တဦးချင်းအ လိုက် ဘတ်ငွေ (၅) သောင်း (မြန်မာကျပ်ငွေ ၁၇ သိန်းခန့်)၊ မိသားစုအလိုက် ဘတ်ငွေ (၁) သိန်း (မြန်မာငွေ ၃၅ သိန်းခန့်) အထိ ပွဲခယူကာ လူမှောင်ခိုကူးလျက်ရှိသည်။ မဲဆောက်တွင် နေထိုင်ပြီး ထိုင်းဧည့်နိုင်ငံသား လက်မှတ် ရရှိထားသည့် မြန်မာမိသားစု (၅) ဦးဆိုလျှင် ဘတ်ငွေ (၂) သိန်းခွဲဖြင့် စခန်းဝင်ရန်မလိုဘဲ အမေရိကန် သို့ ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်သည်။
ငွေအလုံးအရင်းနှင့် ပေးနိုင်သူများ ဒုက္ခသည်စခန်းအတွင်း လာရောက်နေထိုင်ရန်မလိုဘဲ ကုလသမဂ္ဂမှ လူ တွေ့စစ်ဆေးမည့်နေ့ရက်၊ ဆေးစစ်မည့်နေ့၊ လေယာဉ်စီးသင်တန်းနှင့် အခြားဗဟုသုတဆိုင်ရာ သင်တန်းတက် ရမည့်နေ့များကို စခန်းအတွင်းရှိ ပွဲစားက ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်လာပါက မဲဆောက်မှ ကားငှား၍ သွားရုံသာဖြစ် သည်။
အချို့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုလျှင် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် နိုင်ငံခြားမထွက်ကြသော်လည်း ပြည် တွင်းရှိ ၎င်းတို့ဆွေမျိုးသားချင်းများ၊ အသိအကျွမ်းများအား နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များပြုလုပ်ကာ ရန်ကုန်မင်္ဂလာ ဒုံလေဆိပ်မှ ဘန်ကောက်သုဝဏ္ဏဘူမိလေဆိပ်သို့ လာစေသည်။ ထိုမှတဆင့် နယ်စပ်ဒုက္ခသည် စခန်းများသို့ သွားကာ တတိယနိုင်ငံတခုခု ရောက်ရှိရေးအတွက် ကြိုးစားကြသူ အများအပြားရှိသကဲ့သို့ ဒေါနတောင်တန်း ကိုကျော်ပြီး နယ်စပ်မြ၀တီမြို့မှတဆင့် လာရောက်သူများလည်းရှိသည်။
အမေရိကန်ရောက်ရှိသွားသူ အမျိုးသမီးတဦးက “ရန်ကုန်ကနေ လေယာဉ်နဲ့ထွက်တယ်။ ဒေါ်လာ (၂)ထောင် ယူလာတယ်။ ဘန်ကောက်မှာ လာကြိုတဲ့ အသိတွေနဲ့ မဲဆောက်သွားပြီး ပွဲစားနဲ့ တွေ့တယ်။ စခန်းထဲ ၀င်ရဖို့ စောင့်ရတာ (၂) လကျော်ကြာတယ်။ စာအုပ်က ဘန်ကောက်အ၀င် တလနေထိုင်ခွင့်ရတယ်။ ရက်ပြည့်တာနဲ့ မဲဆောက်မှာရှိတဲ့ ထိုင်းလ၀ကရုံးမှာ တလဘတ်ငွေ (၂,၈၀၀) နှုန်းနဲ့ (၂) လ ထပ်ရတယ်။ အဲဒါပြီးရင် စာအုပ်သေပြီ။ ကန့်ထဲကိုဝင်ဖို့ စာအုပ်မသေခင် ပြီးအောင်စီစဉ်ရတယ်။ စခန်းထဲမှာနေဖို့ အိမ်ဝယ်တဲ့ကိစ္စ လူဟောင်းစာရင်းထဲ လူစားထိုးတဲ့ကိစ္စတွေကို ပွဲစားကပဲ အားလုံးစီစဉ်ပေးတယ်။ ဘတ်ငွေ (၁)သိန်းလောက် ကုန်တယ်။ လိုတဲ့ငွေကို အိမ်က အောက်လမ်းကနေ မဲဆောက်ကို ပို့ပေးတယ်။ ငွေလွှဲတဲ့ဆိုင်က ဒုက္ခသည်စခန်း အထိ ငွေလာပို့ပေးတယ်" ဟု ပြောသည်။
ဒုက္ခသည်စခန်း၌ အ၀င်အထွက်ရှိသည့် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်တလျှောက် ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး ညွန့်ပေါင်းအ သင်းမှ အမည်မဖော်လိုသူတဦးက “ဒီကိစ္စ ပြောရရင်တော့ စခန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အန်ဂျီအိုတွေ၊ ယူအန်ကလူတွေ ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေရှိတယ်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်က စခန်းတိုင်းမှာ ဒုက္ခသည်တွေကို မှတ်ပုံတင်လုပ်ပေးတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်။ လက်ဆယ်ချောင်း စလုံး လက်ဗွေနှိပ်ရတယ်။ မှန်ပြားပေါ်မှာ လက်ဗွေနှိပ်ရပြီး ချက်ခြင်းပဲ ကွန်ပျူတာထဲသွင်းတယ်။ ဒါကို ထိုင်းပြည်ထဲရေးက ကိုင်တယ်။ ဒုက္ခသည်တွေ နိုင်ငံခြားထွက်ရဖို့ ဆုံးဖြတ်တာက UNHCR နဲ့ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းပြည်ရဲ့သံရုံးတွေဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံခြားသွားဖို့ စီစဉ်တာက IOM ဖြစ်တယ်။ သူ့ အလုပ်က ဆေးစစ်မယ်။ ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်း တက်ရမယ်။ ခရီးသွားသင် တန်း တက်ရမယ်။ နိုင်ငံခြားထွက်မယ့်လူဟာ စခန်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူး (ပလာ)က လက်မှတ်မထိုးရင် စခန်းထဲက နေ လုံးဝထွက်ခွင့်မရှိဘူး။ အဲလိုစနစ်တကျ ရှိတဲ့ကြားမှာ နိုင်ငံခြားထွက်ရဖို့ လူသစ်တွေကို လူဟောင်းတွေနဲ့ အစားထိုးတဲ့ကိစ္စမှာ အောက်ခြေကနေစပြီး အထက်အထိ အားလုံးပါဝင်မှုမရှိရင် ဒီကိစ္စ ဘယ်ဖြစ်မှာလဲ” ဟု ပြောသည်။
၂၀၀၅ ခုနှစ် ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် မှတ်ပုံတင်စဉ်က မဲဆောက်ဒေသအတွင်းမှ လူများ အုန်းဖျန်၊ နို့ဖိုး၊ မယ် လ စသည့်ဒုက္ခသည်စခန်းများသို့သွားကာ သက်ဆိုင်ရာ စခန်းကော်မတီဝင်များ ရပ်ကွက်မှူးများ ပွဲစားများဖြင့် ဆက်သွယ်ကာ မှတ်ပုံတင် ပြုလုပ်ကြသည်။ ရာနှင့်ချီရှိသည့် အဆိုပါလူများသည် မဲဆောက်မြို့ရှိ မြန်မာစီး ပွားရေး အလွှာအသီးသီးတွင် လုပ်ကိုင်နေကြသူ အများစုဖြစ်သည်။
မဲဆောက်ကျောက်ဝိုင်းမှ ကျောက်အရောင်းအ၀ယ် လုပ်ကိုင်ကြသည့် မြန်မာများ အနည်းဆုံး (၁၀၀) ခန့် (၁) နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း အမေရိကန်ရောက်ရှိသွားပြီဟု သားသမီးများ အမေရိကန်ထွက်သွားသူ မြန်မာ ကျောက်ကုန်သည်တဦးက ပြောသည်။
ခါတော်မီများ ငါးပွက်ရာ ငါးစာချနေချိန်တွင် နို့ဖိုးဒုက္ခသည်စခန်းရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဒုက္ခသည် NI နံပါတ် (၁၆၇) ခု၊ လူဦးရေ (၅၀၀)ခန့်သည် သံရုံးအင်တာဗျူးနှင့် ဆေးစစ်အပြီးတွင် ၎င်းတို့အား အကန့်အသတ်မရှိ ဆိုင်းငံ့ ထားကြောင်း သံရုံးမှ အကြောင်းပြန်ခဲ့သည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဒုက္ခသည်တဦးက ဒုက္ခသည်မဟုတ်သည့် အကြံအဖန်များကိုတောင် လက်ခံလျှင် ဒုက္ခသည် အမှန်အကန်များအတွက် လက်ခံစဉ်းစားသင့်သည်ဟု ပြောပြီး ၎င်းကိစ္စအတွက် အမေရိကန်အစိုးရထံသို့ စုပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးကာ တောင်းဆိုမှု ပြုလုပ်မည်ဟု ပြောသည်။
အမေရိကန်နှင့် အခြားနိုင်ငံများသို့ ရောက်ရှိပြီး ၎င်းနိုင်ငံသားများ ဖြစ်သွားကြသော မြန်မာလူမျိုးအချို့ မဲ ဆောက်သို့ ပြန်လာကာ ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့် တတိယနိုင်ငံတခုခု သွားလိုသူများအတွက် ကူညီမှုများရှိပြီး အချို့မှာ ပွဲစားကဲ့သို့ အခကြေးငွေများယူကာ မက်လုံးပေး စည်းရုံးမှုများကြောင့် မြန်မာအချို့ ခရီးပေါက်သူ များရှိသလို အချို့အလိမ်ခံရရုံမက အမျိုးသမီးအချို့ ဘ၀ပျက် ခဲ့ကြရသည်။
ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင်လည်း စခန်းတာဝန်ရှိသူများကိုယ်တိုင် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုများ ပြုလုပ်ကြသဖြင့် စခန်းအတွင်း ဒုက္ခသည်အတုနှင့် အစစ်များကြားတွင် မကျေနပ်မှုများ ရှိကြသော်လည်း မပြောရဲကြောင်း၊ ၎င်းအတုများကို စခန်းတာဝန်ရှိသူများက အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်များကဲ့သို့ ထားကြောင်း၊ သာမန်လူများအနေဖြင့် ကြည့်လျှင် ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုများမှ ထွက်ပြေးတိမ်း ရှောင်လာသူများဟု ထင်ရလောက်အောင် ဟန်ဆောင်ကောင်းကြကြောင်း ဒုက္ခသည်တဦးက ပြောသည်။
လူမှောင်ခိုနည်းဖြင့် ရောက်လာသည့် ဒုက္ခသည်အတုတို့သည် အချိန်မှန် ဘီဘီစီ၊ ဗွီအိုအေ နားထောင်ခြင်း၊ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ ထုတ်ဝေသော စာအုပ်စာတမ်းများကိုင်ဆောင်ခြင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မိန့် ခွန်းများ အလွတ်ကျက်ခြင်း၊ ၈၈ နောက်ပိုင်း အရေးကြီး မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဖြစ်ရပ်များနှင့် နေ့စွဲများကို အလွတ် ကျက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပြီး ဟန်ဆောင်ကြသည်ဟု သိရသည်။
၎င်းဖြစ်ရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဒုက္ခသည်စခန်းအချို့မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အန်ဂျီအိုများအား မီဒီယာများက မေးမြန်းကြရာ ကောလာဟလ သတင်းများသာ ဖြစ်သည်ဆိုပြီး အဖြစ်မှန်ကို ဖုံးကွယ်၍ တုံ့ပြန်ဖြေကြားလေ့ ရှိသည်။
သို့သော် ဒုက္ခသည်အစစ်များအား နှစ်ချီ၍ ရိက္ခာမပေးသောကြောင့် မယ်လစခန်းမှဒုက္ခသည် (၂၀) ခန့် မဲဆောက်ရှိ UNHCR ရုံးတွင် ယခင်လက လာရောက်ဆန္ဒပြမှုတရပ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဆန္ဒပြသူများ၏ အဆိုအရ မယ်လဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ယူအန်အသိမှတ်ပြု လက်မှတ်ရပြီး ရိက္ခာမရရှိသူ (၁၀၀) ကျော်ရှိသည်ဟု စုံစမ်းသိ ရသည်။
မဲဆောက်အခြေစိုက် လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်တဦးကမူ ဒုက္ခသည်စခန်းမှတဆင့် သွားသော် လည်း ထိုင်းမှာ အသစ်ပြဋ္ဌာန်းသည့် “လူကုန်ကူးမှုကာကွယ်ခြင်းနှင့် တိုက်ဖျက်ခြင်းဥပဒေ ဘီအီး ၂၅၅၁” အရ လူကုန်ကူးမှု မြောက်သည်ဟုပြောပြီး ယခုဖြစ်ရပ်တွင် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူ အဆင့်ဆင့်မှာလည်း လူကုန် ကူးမှုကျူးလွန်ရန် အားပေးကူညီခြင်း ပုဒ်မ-၇ အရ အကျုံးဝင်သည်ဟု ပြောသည်။
ယခုဖြစ်ရပ်များအား သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများက နည်းလမ်းတကျ ဖြေရှင်းမှုမပြုဘဲ ထားမည်ဆိုပါက ဒုက္ခသည်စခန်းအချို့သည် မသမာသူများ ကြီးစိုးရာဒေသနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု ကင်းမဲ့သည့် ပတ်ဝန်းကျင် ဖြစ်လာပြီး မလိုလားအပ်သော ပြဿနာများ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်ဟု ဒုက္ခသည်စခန်းမှ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တဦးက ပြောသည်။ ။
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 4:02 AM
Posted by Andaman Hero at 7:20 PM0comments
RECENT BURMESE NEWS – 08-07-26
Quarter of aid to Myanmar
Today, July 26, 2008,4hours ago
A quarter of cyclone relief aid in Myanmar is being lost because of the military government's foreign exchange system,aUN official has said. Dan Baker, the UN humanitarian co-ordinator for Myanmar,...
Today, July 26, 2008,7hours ago
BANGKOK, Thailand &#8211; As much as 25 percent of cyclone relief aid in Myanmar is being lost because of the military government's foreign exchange system,aUnited Nations official said Friday. D...
Eugene resident returns from Myanmar relief trip
EUGENE, Ore. - While the Myanmar government kept the rest of the world out followingadevastating cyclone, two Eugene residents were able to get into the devastated country. Curt and Cathy Bradner r...
Political Situation in Burma Still Impeding Aid
Today, July 26, 2008, 16 hours ago
Burma will continue to require international aid to ensure communities hard hit by the devastation from Cyclone Nargis are able to avoid starvation. But, as Ron Corben reports from Bangkok, despite ...
New Delhi - The Rangoon West District Special Court on Tuesday begun hearing the case of Nay Phone Latt,aBurmese youth arrested in early this year for posting free writings that promote the feelings...
Today, July 26, 2008, 17 hours ago
Survivors of Myanmar's devastating cyclone will be dependent on aid for at least another six months, the United Nations humanitarian chief has warned.In an interview with AFP, John Holmes urged the co...
International aid for Burma faces funding crunch
International efforts to help millions of people in Burma (Myanmar) left homeless and destitute byalethal May cyclone are running low on funds, exposing political divisions among donor nations tow...
Washington -- Aung Din survived the torture and years of imprisonment he received in Burma as punishment for his political views. On July 24 he spoke at the United Nations in New York City on behalf o...
WASHINGTON: The US Congress has voted to renewalegislation banning all imports from military-ruled Myanmar and sent it for President George W. Bush's signature, lawmakers said on Thursday. The...
Foreign Investment In Myanmar Falls 77% On Year - Government
plummeted by 77% over the past fiscal year as investments in the oil, gas and electricity sectors were significantly lower, official figures showed Friday.
Today, July 26, 2008, 20 hours ago
Posted on: Friday, 25 July 2008, 09:00 CDT Text of report in English by Norway-based Burmese Democratic Voice of Burma website, on 25 July 25 July, 2008: The website run by the Oslo-based Democratic ...
Food top priority for Burma
New Delhi - Nearly three months after the killer Cyclone Nargis played havoc&#160; in Burma's southwestern coastal region, hundreds of thousands are still not getting enough food, the United Nations W...
New Delhi - Over two months on after relief efforts, the United Nations has perforce admitted that there isa'serious issue'&#160; involved in the conversion mechanism of the aid money provided to Bu...
New Delhi - The Burmese military junta has sentenced 10 student activists, who were arrested during last year's September protests, to two years in prison with hard labour.&#160; They have been sent t...
Much of Myanmar cyclone aid lost
Today, July 26, 2008, 21 hours ago
BANGKOK, Thailand - As much as 25 percent of cyclone relief aid in Myanmar is being lost because of the military government's foreign exchange system,aUnited Nations official said Friday.
YANGON, 25 July 2008 (IRIN) - Followingathree-day mission to Myanmar, the UN Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator John Holmes says he hopes for stronger ...
Today, July 26, 2008, 22 hours ago
As much asafifth of the tens of millions of dollars in international aid sent to Burma's cyclone victims is being lost asaresult of the regime's foreign exchange regulations, according to United N...
US Warns Myanmar To Cooperate With UN Or Face More Pressure
Yesterday, July 25, 2008, 3:22:32 PM
UNITED NATIONS (AFP)--The U.S. warned Myanmar's military rulers Thursday that they must cooperate with UN mediator Ibrahim Gambari or face increased pressure from the Security Council.
Rice Urges ASEAN to Push Burma to Reform
Yesterday, July 25, 2008, 3:16:22 PM
SINGAPORE—U.S. Secretary of State Condoleezza Rice urged Southeast Asian nations on Wednesday to put more pressure on Burma's junta to improve human rights and adopt democratic reforms. Speaking af...
Posted by Andaman Hero at 8:18 PM0comments
ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ်များမှကုလသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
Posted by Andaman Hero at 4:54 PM0comments
Posted by Andaman Hero at 11:57 AM0comments
Posted by Andaman Hero at 11:53 AM0comments
Posted by Andaman Hero at 11:51 AM0comments
Posted by Andaman Hero at 11:48 AM0comments
reap what plant
Posted by Andaman Hero at 4:35 PM0comments
Posted by Andaman Hero at 4:16 PM0comments
Oh !!! my God what is happening with them ...
They want to know how their bosses are making wicked plans
RECENT BURMESE NEWS – 08-07-26 Quarter of aid to M...
They want to know how their bosses are making wick...